Location: musha » Kutumira » Nhau dzeWaya » Pamusoro 6 Hutano hweTekinoroji Mafambiro e2022
Kupinda muna 2022, kuvepo kweCCIDID-19 kuchiri kuenderera kutenderera pasirese. Izvo zviri kutaurwa, zvakakosha kuti urambe uchifunga nezve tech maitiro anofambisa shanduko yedhijitari. MobiDev nyanzvi dzakanyora akanyanya kukosha ehutano tekinoroji maitiro anokanganisa indasitiri muna 2022.
Trend 1 Artificial Intelligence muHutano
Muindasitiri yezvehutano, kudzidza kwemichina kunobatsira zvakanyanya mukuvandudza mishonga mitsva uye nekubudirira kwemaitiro ekuongorora. AI iri kubatsira kuongorora maCT scans kuti aone mabayo. Tichitaura nezvehutano hweMental, MIT uye Harvard University vaongorori vakashandisa muchina kudzidza kuronda mafambiro uye hutano hwepfungwa maererano neCOVID-19 denda.
Telehealth inotarisirwa kukura kusvika ku $ 185.6 bhiriyoni ne2026. Kana iwe uchida yakatsaurirwa telemedicine app, imwe yeakakosha matekinoroji anozodiwa ndeye WebRTC, yakavhurika-source API-based system.
Imwe yeanonyanya kufarirwa uye anobatsira mafomu eiyi tekinoroji kushandiswa kweakasanganiswa echokwadi mahedhifoni seMicrosoft Hololens 2 nevarapi. Iyo headset inogona kupa misoro kumusoro ruzivo kune chiremba anovhiya ichivabvumira kushandisa maoko avo ese panguva yekuita.
Musika wepasi rose weIoT wezvishandiso zvekurapa unofungidzirwa kusvika paUSD 94.2 bhiriyoni panosvika 2026 kubva paUSD 26.5 bhiriyoni muna 2021. Neindasitiri yezvehutano iri kuramba ichiwedzera kubatana kuburikidza nehunyanzvi uhu, IoT haigone kufuratirwa.
Trend 5 Kuvanzika uye Chengetedzo
Kuve nechokwadi chekuti sangano rako rinoenderana neHIPAA inhanho yakakosha yekutanga kudzivirira kutyora kwedhata kunodhura. Kana uri kushandira varwere kune dzimwe nyika, zvingava pfungwa yakanaka kufunga nezvemitemo yeGeneral Data Protection Regulation (GDPR) muEuropean Union.
Trend 6 Organ Care uye Bioprinting
Nekukura kwemusika wepasirese wemusika wakafanotaurwa kusvika pamadhora 26.5 bhiriyoni panosvika 2028, kuisirwa nhengo chikamu chakakosha cheindasitiri yehutano. Iyo Organ Care System yakagadziridzwa neTransmedics muenzaniso wakanaka. Bioprinting yakamboitwa kare asi haisati yarova mainstream.
Canada Jetlines: Ndege nyowani yekutandara yakagadzirira kutora ...
Mitsva Yekiriniki Miedzo yeAcute Myeloid Leukemia
ILTM Asia Pacific inogadza mazuva matsva e2022